China Stay Rod ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်စက်ရုံ Yongguang
ကျွန်ုပ်တို့၏အဆင့်အတန်းမြင့်မားသောသက်တောင့်သက်သာရှိသည့်အမျိုးအစားများအားကေဘယ်ကြိုးများနှင့်မီးရထားများနှင့်လျှပ်စစ်ဂီယာလိုင်းများရှိလျှပ်စစ်တိုင်များတပ်ဆင်ရန်အသုံးပြုသည်။ ကြာရှည်ခံမှု၊ ခိုင်ခံ့သောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်ကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်တို့ဖြင့်အသုံးပြုထားသည့်လှံတံသည် ကျွန်ုပ်တို့၏နေထိုင်မှုလှံတံကိုအပူဖြင့်ကုသသည်။ ၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောသွပ်သွင်းခြင်းနှင့်မြင့်မားသောအပူချိန်နှင့်ဖိအားများ၏သက်ရောက်မှုများကိုအလွယ်တကူခံနိုင်သည်။
ပစ္စည်း - ခန္ဓာကိုယ် သံမဏိ
အပြီးသတ် Hot Dip Galvanize
strain clamp သတ်မှတ်ချက် - အခြေခံ strain clamp စနစ်နှစ်ခုရှိသည်။ ၁။ ဖြုတ်တပ်နိုင်သောတင်းမာမှုညှပ်များ၊ ပါးလွှာသောတံတိုင်း၊ မူလီအမျိုးအစားတင်းမာမှုညှပ်များကဲ့သို့သောဖြုတ်တပ်နိုင်သောညှပ်များကိုနောက်ပိုင်းတွင်ချိန်ညှိနိုင်သည်။ ၂။ ဝါယာကြိုးအရှည်နှင့်လုံးဝကိုက်ညီရန်လိုအပ်သော compression terminal clamps ကဲ့သို့သောဖြုတ်။ မရသောညှပ်များ။ strain ညှပ်အမျိုးအစားများကို ll -1, ll -2, ll -3, ll -4, etc ဖြစ်ကြသည်
ဤနယ်ပယ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံများစွာရှိပြီးကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အသွေးမြင့်သောတိုင်လိုင်း hardware ကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ ဤအပိုင်းများကိုကြီးမားသောတိုင်များနှင့်တိုင်များတည်ဆောက်ရန်အသုံးပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးတာရှည်ခံပါသည်။ ပေးထားသောဟာ့ဒ်ဝဲသည်ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခြင်းမရှိသောသဘာ ၀ ကိုသေချာစေရန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးနောက်သေချာစွာစစ်ဆေးသည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျယ်ပြန့်သောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာအဆောက်အအုံများကကျွန်ုပ်တို့အားတိတိကျကျသတ်မှတ်ထားသောအချိန်ကာလအတွင်းတိုင်လိုင်းနှင့်ဆက်စပ်သောပစ္စည်းများကိုပို့ဆောင်ပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးကိုအမြဲဂရုပြုပါသည်။ လျှပ်ကာအားလုံးသည် ၁၀၀% တင်းကြပ်သော IEC (သို့) ANSI စံနှုန်းများရှိသည်။ သူတို့မထွက်ခွာမီအရည်အချင်းပြည့်မီသောထုတ်ကုန်နှုန်းသည် ၁၀၀% ဖြစ်ကြောင်းအာမခံပါသည်။ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း၊ ဗီယက်နမ်၊ အီတလီ၊ ရုရှား၊ ဂရိ၊ အာဂျင်တီးနား၊ ကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးကိုသေချာစေရန်ကုမ္ပဏီသည်ပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပသုံးစွဲသူများအားနာမည်ကောင်းရရန် ISO 9001: 2008 အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကိုရရှိခဲ့သည်။
၁။ ODM နှင့် OEM တို့တွင်အတွေ့အကြုံများစွာရှိသည်
၃။ အရည်အသွေးမြင့်တိကျသော ၀ န်ဆောင်မှုအတုနှင့်လုပ်ရန်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသည်
ကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုစိတ်ဓာတ်၊ လျင်မြန်သောတုန့်ပြန်မှုအချိန်၊ အချိန်မှန်ဖြန့်ဝေမှု၊ တာ ၀ န်ယူမှုနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မှုတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့အစကတည်းကကျင့်သုံးခဲ့သည့်အရာများဖြစ်သည်။ အပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်း, အရည်အသွေးကောင်းနှင့်အချိန်ပေးပို့အပေါ်။ ဤအရာအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့အားထောက်ပံ့ပေးသည်။ သင်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုသင်စိတ်ဝင်စားပြီးနှစ် ဦး နှစ်ဖက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေရန်သင်နှင့်ပူးပေါင်းရန်နွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါသည်။
ယခင်: Insulator ကိုနေပါ
နောက်တစ်ခု - ဘောလုံး Clevis
Thimble eye, Twin eye and Triple eye drop forged eye distribute pulling stresses uniformly over individual strands of guy wire and keep the guy wire from spreading, kinking, or bending. Square nut assembled to rod. General Material-Body Steel Finishing Hot Dip Galvanize With our extensive experience in this field, we are able to manufacture and supply high quality pole-line hardware. These parts are used to build huge poles and pylons. Our products are made o...
Yoke Plate isacommon hardware for any construction field. It is also the major parts of powerline and transmission system. We have many different types of Yoke plate, which are made by high grade steel. We also provide customize service for our clients to match their requirement. Material-Body Steel Finishing Hot Dip Galvanize With our extensive experience in this field, we are able to manufacture and supply high quality pole-line hardware. These parts are ...
Clevis လျှာသို့မဟုတ် Clevis မျက်လုံး
Clevis Tongue isacommon hardware in powerline and transmission line system. It can be used to connect suspension clamps to other fittings and provide for motion. It can be forging or casting type. We are able to customize according to clients requirement. General Material-Body Steel Material-Pin (Clevis) Galvanized Steel Material- Pin (Cotter) Stainless Steel Strength Rating 70KN, 120KN, 180KN Finishing Hot Dip Galvanize We always pay great attention to the quality of our prod...
Strap isacommon hardware for any construction field. It is also the major parts of powerline and transmission system. We have many different types of strap, which are made by high grade steel. We also provide customize service for our clients to match their requirement. Material-Body Steel Finishing Hot Dip Galvanize With our extensive experience in this field, we are able to manufacture and supply high quality pole-line hardware. These parts are used to bu...